Horudhac: Fulham vs Chelsea… (Blues oo eegeysa inay caawa dib ugu soo laabto waddada guusha ee horyaalka Premier League) – Gool FM
Haaruun January 16, 2021
(London) 16 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa indhaha ku haysa inay dib ugu soo laabto waddada guusha ee horyaalka Premier league, marka ay caawa garoonka Craven Cottage ku booqanayaan naadiga ay xafiiltamaan ee Fulham.
The Blues ayaa hoos ugu dhacday kaalinta sagaalaad ee miiska kala sarreynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay hal guul ka heleen lixdoodii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka.
Dhinaca kale Kooxda Fulham ayaa barbaro gashay mid kasta oo ka mid ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka, waxaana ay haatan fadhiyaan kaalinta 18-aad.
Weeraryahanka Kooxda Fulham ee Aleksandar Mitrovic ayaa dib ugu soo laabtay tababarka buuxa, waxaana uu diyaar noqon karaa markale kaddib markii uu seegay kulankii Arbacadii ay barbaraha la galeen Tottenham.
Mario Lemina iyo Tom Cairney ayaan la heli karin kulankan, maxaa yeelay waxa ay la maqan yihiin xanuun iyo dhaawac jilibka ah sida ay u kala horreeyaan.
Daafacyada Chelsea ee Reece James iyo Andreas Christensen ayaa labaduba ka soo kabsaday dhaawacyo ay qabeen.
Laacibka khadka dhexe ee N’Golo Kante oo laga dabiibayaan dhaawac muruqa ah, waxaana si kastaba uu seegi doonaan kulankan maxaa yeelay waa uu ganaaxan yahay.
>- Fulham ayaa guul la’aan ah 19-keedii kulan ee la soo dhaafay oo ay wajahday Chelsea tartammada oo dhan, laakiin dhammaantood mid kaliya ayaa ahaa Premier League, waxa ayna barbaro la galeen 7 kulan, halka ay guuldarro kala kulmeen Blues 12 kulan.
>- Guushoodii keli ahaaneed ee 38-dii kulan ee ugu dambeeyay oo ay Blues ka heleen waxa uu ahaa kulan Premier League oo ka dhacday garoonka Craven Cottage bishii Maarso 2006, markaasoo uu Luis Boa Morte dhaliyay goolka kaliya ee ay ku adkaadeen.
>- Fulham ayaa noqon karta kooxdii ugu horreysay ee barbaro gasha lix kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League tan iyo Manchester City oo todobo kulan oo xiriir ah horyaalka barbaro gashay sanadkii 2009-kii.
>- Fulham Ma aysan gaarin lix kulan oo horyaalka ah oo guuldarro la’aan ah tan iyo todobo kulan oo xiriir ah oo ay guul la’aan ahaayeen bilowgii xilli ciyaareedkii 2010-11.
>- Cottagers ayaa kaliya laga dhaliyay saddex gool lixdii kulan ee ugu dambeeyay tartammada oo dhan.
>- Fulham ayaa guul la’aan ah 18-keedii kulan ee horyaalka Premier League kulammada London Derby tan iyo markii ay garaaceen West Ham maalintii ugu horreysay sanadka cusub ee 2014-kii.
>- Ademola Lookman ayaa gacan ka geystay afar ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay kooxda Fulham ka dhalisay horyaalka, waxa uu dhaliyey hal gool isagoo caawiye ka ahaa saddexda gool ee kale.
>- Kooxda Chelsea ayaa khasaaro la kulantay afar ka mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, waana in ka badan intii ay la kulmeen 23-kii kulan ee markaas ka horreeyey.
>- The Blues ayaa guuldarro la kulmi karta afar kulan oo xiriir ah horyaalka oo ay marti yihiin markii ugu horreysay tan iyo markii shan guuldarro oo xiriirah ay bannaanka ku soo qaateen horyaalka laga soo bilaabo October illaa December 2000.
>- Timo Werner ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee kooxeed tan iyo 7 November waxaana uu ka dhaliyay Morecambe Axaddii hore, si kastaba ha noqotee, gool ma dhalin sagaalkiisii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League.
>- Frank Lampard oo haatan ah macallinka Blues ayaa dhaliyay lix gool oo Chelsea ay dhalisay 8 kulan oo Premier League ah oo uu ku ciyaaray garoonka Craven Cottage.